Etu esi eji vidiyo maka ire ahịa azụmaahịa obere ala gị | Martech Zone
You ma mkpa nke ahịa vidiyo maka ọnụọgụ ntanetị nke gị azụmaahịa ụlọ?
N'agbanyeghị na ị bụ onye na-azụ ma ọ bụ onye na-ere ere, ị chọrọ a pụrụ ịtụkwasị obi na reputable ika njirimara iji dọta ndị ahịa. N'ihi ya, asọmpi ahụ na azụmaahịa ụlọ dị oke egwu na ị gaghị enwe ike ịkwalite obere azụmaahịa gị.
N'ụzọ dị mma, ahịa dijitalụ enyewo azụmahịa nke nha niile nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru iji mee ka mmata aha ha. Marketingzụ ahịa vidiyo bụ usoro dị mkpa n'ịzụ ahịa dijitalụ ma baara ndị ọrụ niile uru, ọkachasị ezigbo ụlọ.
Y’oburu n’acho imuta ufodu ahia ahia vidiyo iji di mfe iji bulie obere ulo ahia gi, gaa na igu akwukwo a.
Kpebisie ike na ihe mgbaru ọsọ gị ma chepụta atụmatụ
Akpa, ị kwesịrị ịmara na ị nweghị ike ịmalite ịme vidiyo na-enweghị ebumnuche na atụmatụ ọ bụla. Marketingzụ ahịa vidiyo bụ ọrụ dị oke ọnụ ma na-eri oge ma chọọ usoro zuru oke na nke ziri ezi.
Tupu ịmalite ịzụ ahịa vidiyo, wepụta oge iji chọpụta ebumnuche gị ma chepụta atụmatụ iru ha. Ikwesiri ima ihe ị choro inweta na mgbe i gha enweta iru ihe ichoro.
Lee ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ dị iche iche ị nwere ike ịtụle:
Ọnụ ọgụgụ nke echiche gị videos kwa ọnwa
Ntinye aka ọnụego
Iji ghọta ọnụma ezi uche dị na ya maka ndị a, ịnwere ike ịme nyocha asọmpi iji chọpụta nsonaazụ nke ndị na-asọmpi ala gị.
Mgbe ị na-ekpebi ihe mgbaru ọsọ gị, ị nwere ike chepụta atụmatụ dabara ya. Gbalịa ịmalite atụmatụ siri ike ma rapagidesie ike na ya. N'ezie, dịka ị bụ onye mbido, ị nwere ike ịchọ ụfọdụ nyocha na mpaghara etiti.
Debe Akwụkwọ Mmefu Ego Ga-ekwe Omume
Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịchọpụta ego ole ị chọrọ iji mejupụta ala gị usoro mgbasa ozi vidiyo.
Nke a nzọụkwụ dị mkpa iji jide n'aka banyere àgwà nke gị videos. Cheta na imepụta vidiyo mara mma chọrọ ọtụtụ ngwaọrụ, ma mechaa, ị ga-ewepụta ego zuru oke.
Kwesighi imechu gị ihu ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ụgwọ mmefu ego dị ukwuu; i nwere ike na-amalite na ulo-mere videos na free video edezi software.
Gbalịa ịmụta N'onwe Gị ndụmọdụ maka imepụta vidiyo iji belata mmefu. Nwere ike jiri nwayọ gaa maka ngwa ọrụ adịchaghị na vidiyo vidiyo ọkachamara maka azụmaahịa gị.
Kọwaa Udị Pụrụ Iche
Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka nwere a pụrụ iche ịke gị digital ahịa, karịsịa na vidiyo gị. Consistentnọgidesi ike n'ụdị a na-enyere ndị na-ege gị ntị aka ịmata gị mgbe obere oge gachara.
Styledị gị, gụnyere agba, ụda olu, ụdị akụkọ akụkọ, wdg, na-anọchite anya njirimara gị. Gbalịa ịkọwa ihe dị jụụ iji dọta uche ndị na-ege gị ntị. Nwere ike ịnweta nzaghachi site na ndị na-ege gị ntị iji bulie ụdị vidiyo gị.
I nwekwara ike kọwaa isiokwu ndepụta maka mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Ọ pụtara na mgbe onye ọbịa hụrụ nri gị, ihe ndị ahụ nwere isiokwu ya. Nke a bụ ezigbo ụzọ iji dọta uche ndị na-ege ntị na nleta mbụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ isiokwu ndepụta ndị a na Instagram:
Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe nrụpụta ahụ na-agbakọ ọnụ ọnụ. Can nwere ike hazie isiokwu dị iche iche maka azụmaahịa vidiyo ụlọ gị.
Humanize vidiyo ụlọ gị
Achọpụtala na ọ bụrụ na gị na ndị na-ege gị ntị na-enwe mmekọrịta enyi karị, ọnụego itinye aka dị elu ị na-enweta.
Nke a bụ ọbụna ihe dị mkpa karị ma a bịa n’ịzụ na ire kondo ma ọ bụ ụlọ. Inwe ụlọ bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị mma nke metụtara mmetụta na omume na-akpali akpali.
Yabụ ịkwesịrị itinye mmetụta ndị a na vidiyo gị ma kọọ akụkọ gị tụlee nsogbu niile nke ndị na-ege gị ntị.
Iji maa atụ, gbalịa imere ndị na-ege ntị ọmịiko banyere ọnụ ahịa dị elu na onu oriri. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ị ga-eji vidiyo nke ezigbo ala na ụlọ gị mee ka ndị ọbịa kwenye na ị na-eche echiche ka ha.
Họrọ usoro ziri ezi maka ịre ahịa vidiyo
Ga-amarịrị na ọwa dijitalụ ọ bụla nwere ndị na-ege ya ntị, yabụ ị ga-ekekọrịta vidiyo gị na nyiwe dabara maka ezigbo ụlọ.
Dịka ọmụmaatụ, LinkedIn bụ ọwa na-elekọta mmadụ na-ele ọrụ anya, ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ nwere akaụntụ maka ha. N'ihi nke a, ọ dị mma ka ị kesara vidiyo gị n'elu ikpo okwu a.
Sociallọ ọrụ mgbasa ozi kachasị dị ka Facebook, Instagram, na Twitter dị mkpa maka ahịa vidiyo gị. Iji maa atụ, Instagram nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru maka azụmaahịa vidiyo dị ka nri ndepụta, Akụkọ, vidiyo vidiyo, IGTV, na Reels. Have ga-eme nke kachasị site na njirimara ndị a iji nweta ohere kachasị enwere ike.
Hazie vidiyo gị
Vidio na-ahụ maka pasent dị ukwuu nke okporo ụzọ mmekọrịta ọha na eze. Imirikiti vidio ndị a na-emepụta ụdị, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ị dịrị n'ihu ndị asọmpi gị.
Ndị ọrụ na-ebute ọtụtụ vidiyo, ma ohere ị nwere ịchọpụta dị obere. Otu ụzọ ị ga - esi bulie ọhụhụ gị ma tinye vidiyo gị n'anya ndị ọrụ ndị ọzọ bụ ịhazi usoro.
Oge kachasị elu n'ịntanetị nke imirikiti ndị mmadụ na-eji nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na-adịgasị iche site na ikpo okwu yana ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, oge kachasị mma maka ikenye na Instagram dị iche na Twitter.
Yabụ na ị ga - ejikarị usoro ịhazi usoro mgbasa ozi mmekọrịta iji biputere oge kachasị mma maka ụlọ ọrụ gị ma nweta ọnụego itinye aka na vidiyo gị.
Nke a bụ ihe atụ nke ịhazi usoro ihe site na iji Anwụrụ ọkụ:
Leverage Ike nke Akaebe
Aha njirimara bụ isi ihe na-agba ume atụmanya ịghọ ndị ahịa gị. Usefulzọ bara uru iji mee nke ahụ bụ ịhapụ ndị ahịa gara aga ka ha kwuochitere gị. Akaebe dị oke mkpa maka obere azụmaahịa n'ihi na ha na-eweta ntụkwasị obi ma na-eme ka atụmanya ọhụụ nwee ahụ iru ala.
Ọ bụrụ na ndị ahịa gị bụrụ ndị nwe ụlọ nwere obi ụtọ, ọ ga-abụ na ha na-ekwu okwu ọma banyere akara gị. Ikwesiri iso ha na ndi mmadu ma nye ha ohere ikwenye ihe omuma gi. Gbalịa itinye vidio ịgba akaebe ha na ebe nrụọrụ weebụ gị iji mee ka ha mata na echiche ha dị mkpa.
Nke a bụ ihe atụ nke ezigbo akaebe sitere na Youtube:
Na-ebuli Ogologo Videos Gị
Ọbụna ogologo vidiyo gị nwere ike ịmetụta ROI nke azụmaahịa vidiyo ụlọ gị. Na mkpokọta, ndị na-elekọta mmadụ na-ahọrọ vidiyo dị mkpụmkpụ ma na-atọ ụtọ. Ọ bụ ya mere obere vidiyo dị ka Reels ma ọ bụ TikTok ji arị elu.
N'ezie, ogologo vidiyo kachasị mma dabere na ụlọ ọrụ gị na ikpo okwu ị na-ekere na ya. Na-amalite na, ị pụrụ ịtụle 2-nkeji videos gị ezigbo video size.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta vidiyo toro ogologo maka nyiwe dịka Youtube na IGTV wee kesaa ụdị nke vidiyo ndị ahụ dị mkpụmkpụ na nyiwe ndị ọzọ. Zọ a, ị nwere ike ịgba ndị na-ege gị ntị ume ka ha lelee profaịlụ gị na nyiwe ndị ọzọ.
Nyochaa arụmọrụ vidiyo gị
Buru n'uche na ọ dịghị atụmatụ ga-adịgide adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Dị ka obere azụmaahịa ụlọ nke na-amalite ahịa vidiyo, ị nwere ike ịchọ ịgbanwe usoro ị na-eme kwa oge.
Gbalịa nyochaa arụmọrụ gị ma chọpụta adịghị ike na ike gị. Mgbe ị matara vidiyo kacha mma na kacha njọ, ị nwere ike ibuli vidiyo gị n'ọdịnihu ma bulie ROI dị elu.
Nke a bụ ihe atụ nke ngwaọrụ nyocha na Twitter:
Gbaa A / B Ule
N’agbanyeghi otu isiri gosiputa vidio, ikwesiri ima ụdị vidiyo, isi okwu, hashtag na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-amasị ndị na-ege gị ntị. Nyocha A / B bụ ụzọ bara uru iji ghọta mmeghachi omume nke ndị na-ege gị ntị na ihe dị iche na mgbasa ozi gị / ebe nrụọrụ weebụ.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe hashtag gị maka vidiyo dị iche ma zipụ nsụgharị abụọ ahụ iji soro mmeghachi omume nke ndị na-eso ụzọ mmekọrịta gị na ha. Egosiputala nke a bu ezigbo uzo iji bulie ihe gi dika ihe ndi mmadu kwuru.
ngosi: Martech Zone agụnyela njikọ njikọta maka Anwụrụ ọkụ.
Tags: ule uleika ahaigwe mmadụvidiyo nke ndị ahịandị akaebe ndị ahịahashtagahịa ịre ụlọire ala na ụlọàmà ụlọ alavideo ụlọ alaezigbo vidiyovidiyo nke akaebenchịkọta twittervidiyo vidiyovideo ogologoahịa vidiyo